အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅
Posted by kai on Aug 17, 2015 in Editor's Notes | 27 comments
၀ါဆိုလပြောင်း၊ မိကျောင်းဖွေးဖွေး၊ မိုးဧဧ။
၀ါခေါင်တကြောင်း၊ ထနောင်းကျောင်ကျစ်၊ ဆူးရစ်ပွင့်ကာ၊ မိုးမရွာ၊ ရွာပါသော်လည်း၊ မိုးမသည်း။ – မုံရွေးဆရာတော်မှတ်စု
”ချစ်တဲ့သူငယ်လေ၊ သူငယ်ချင်းကောင်း ယောက်မတို့လေ။ ၀ါဆိုငယ်မှ ၀ါခေါင်၊ ရေဖောင်ဖောင်နှင့် ရွာတောင်ကချောင်း၊ ရွာနောက်ပေါင်းကို၊ – ရှင်ငြိမ်းမယ် အိုင်ချင်း
မြန်မာတို့၏ ၁၂-လရာသီမိုးဘွဲ့ပါ ၀ါဆိုနှင့်ဝါခေါင်လ၏ မိုးအခြေအနေပြ ကဗျာ၊ ရှေးအိုင်ချင်း ကောက်နှုတ်များဖြစ်ပါသည်။ မိကျောင်းပန်းတို့ ဖွေးဖွေးထကာ မိုးအေးလေးများရွာမည်။ ၀ါခေါင်တွင်ကား မိုးကားမသည်း၊ သို့သော် ချောင်း၌ကား ရေဖောင်ဖောင်ထမည်ဟုဆိုလေသည်။
ယခုနှစ်တွင် ၀ါထပ်ပေရာ ဒုတိယ၀ါဆို ဇူလိုင်လကုန်တွင်သည်းသည်းမည်းမည်းရွာခဲ့သောမိုးတို့ကြောင့် မြန်မာပြည်တွင်တ၀ှမ်း ပြည်နယ် ၁၂ခုနေ လူ၁သန်းကျော် ရေကြီးရေလျှံ မြေပြိုဒုက္ခခံစားနေကြရ၏။ မိုးဘွဲ့ဆိုထုံးကို ရေကြီးမြေပြို ဒုက္ခကပ်ဘေးဆင့်ထားပါလေသည်။
အမေရိကားတွင်လည်း ကယ်လီဖိုးနီးယား၌ သမိုင်းဝင်မိုးခေါင်ခြောက်သွေ့လွန်းနေသည်။ အခြားပြည်နယ်များသည်လည်း ဆောင်း၊နွေ၊မိုး သဘာဝထက်လွန်ကဲနေသည်တို့နှင့်တိုးကာ ဖြစ်ခဲ့လျှင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအား များလှသည်ကို တွေ့နေကြရသည်။
နှစ်သန်းပေါင်း ၃၆၀၀ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်သော မြေကမ္ဘာသည် သဘာဝတရား ဂေဟအားဖြင့် အချိန်ယူညှိပေးရင်း သတ္တ၀ါတို့ မှီခိုအသက်ရှင်ရပ်တည်နေနိုင်သည်အထိ ပြောင်းလဲပြုပြင်လာခဲ့သည်။
မိခင်သဘာဝသည် ဂေဟစနစ်ကြီးအဖြစ်ဟန်ချက်ညီညီထားလျှက် ရုပ်ဝတ္ထုများကိုဖန်ဆင်းပေးသည်။ လူသားသည်လည်း သဘာဝတရား၏ဖန်ဆင်းမှုတခုပင်မဟုတ်ပါလား?။ ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆအရမူ လူ့ရုပ်ကလာပ်အစဉ်သည် က၊ံစိတ်၊ဥတု၊အဟာရ လေးပါးပေါ်တွင်ဟန်ချက်ညီရပ်တည်ပွားယူသည်။
ဤကမ္ဘာသည်လေထု၊ ရေထု၊ မြေထု၊ ရေခဲထု နဲ့ ဇီဝထု အချင်းချင်း အညမညအပြန်အလှန်ဂေဟစနစ်ထား ရပ်သည်သည်။
လူ့သမိုင်းတလျှောက် မီးသုံးစွဲ၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်၊စာရေး/ဖတ်လာနိုင်သကဲ့သို့ပင် ၁၈ရာစု၏ စက်မှုတော်လှန်ရေးသည်လူတို့၏ လူနေမှုဘ၀ကို တဆင့်အရှိန်မြှင့်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်ဆိုပါသည်။
လူတို့ မိုးပျံနိုင်ခဲ့သည်။ မြေလျှိုးကြည့်ခဲ့ပြီ။ သံသေ(သံနိုင်)ကာ တပြည်ဝလျှက် လူနေမှုအဆင့်အတန်းတို့မြင့်ခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်လည်းတွေ့ခဲ့သည်။ နျူကလီးယားဗုံးလည်းထုတ်ခဲ့၏။ အကျိုးဆက်အဖြစ်ကား စက်ရုံကြီးများမှထွက်သော မီးခိုးငွေ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၊ အိုဇုန်းပေါက်စေသောကလိုရိဖူရွန် စသည့်ဖန်လုံအာနိသင်ပြဓာတ်ငွေ့တို့အား ဂေဟစနစ်တွင်လိုသည်ထက်ပိုထုတ်ခဲ့ကြလေသည်။
၂၁ရာစုရောက်၍ မျက်လုံးများဖွင့်ကြည့်ပါသော် လူ့ပယောဂဖြင့်ဂေဟစနစ်ပျက်သည်ကိုမြင်ရပါလေပြီ။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ကမ္ဘာ့မြေရာသီဥတုအစွန်းရောက်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ဤသို့မိန့်ထားသည်။
“Safeguard Creation, Because If We Destroy Creation, Creation Will Destroy Us” – Pope Francis
မိခင်သဘာဝ၏ တုံ့ပြန်လက်စားချေနေချိန်ရောက်ပါပြီ။ ယခုရာစုနှစ်အတွင်းတွင် သမိုင်းတွင်ရစ်တော့မည့် သဘာဝကပ်ဆိုးကြီးများ မြင်ကြရလိမ့်မည်။
“I don’t think we will survive another 1,000 years without escaping beyond our fragile planet,” – Stephen Hawking
ပြီးခဲ့သော ဧပြီလက သိပ္ပံပညာရှင်တို့တွင်အကြီးကျယ်ဆုံးလူသားတဦးဖြစ်သော ပါမောက္ခစတီဗင်ဟော့ကင်းမှ အထက်ပါအတိုင်းဆိုခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပူနွေးလာသဖြင့် အာတိတ်စက်ဝိုင်းနေ ဧရာမရေခဲပြင်ကြီးများတ၀ုန်းဝုန်းပြိုပျော်ကျနေသည်။ ထိုပျော်ရေတို့ကြောင့် ပင်လယ်ရေပြင်မြင့်တက်နေပေရာ နောင်၁၅နှစ် (၂၀၃၀) တွင် အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဘန်ကောက်သည် ပင်လယ်ရေပြင်အောက်ကျရောက်သွားပါတော့မည်။ တပြိုင်တည်းလိုလို မြန်မာတို့၏ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးသည်လည်း ရေငံတို့ဝင်ကာ ဒုက္ခပင်လယ်အမည်ပြောင်းကြရမည့်သဘောရှိသည်။
မိုးဝင်လျှင် ပုံမှန်လာနေသော မုတ်သုန်မိုးသည် ဟိမ၀န္တာတောင်ပေါ်တက်ရွာပါလျှင် တဆောင်းတနွေလုံးအတွက် မြစ်ကြီးများလိုအပ်သော ရေလုံးရေရင်းပေးမည့်ရေခဲ၊ဆီးနှင်းခဲများအဖြင့် သဏ္ဍန်ပြောင်းပါသည်။
သို့သော် ယခုခေတ်ပူကြီးတွင် ကမ္ဘာပူနွေးနေသဖြင့် မိုးရေတို့လည်း ဆီးနှင်းခဲမဖြစ်နိုင်။ ရေခဲအဖြစ်မထိမ်းထားနိုင်။
သို့ဆိုသော် ဟိမ၀န္တာတောင်ကြောမှ ရေခဲပျော်ရေကို အရင်းအမြစ်အဖြစ်ထားရသော ဂင်္ဂါ ၊ ဧရာဝတီ၊ သံလွင်၊ မဲခေါင်မြစ်ကြီးတို့သည် မိုးတွင်ရေလျှံ၊နွေတွင်ရေခမ်း၍သာနေရတော့မည်။
မြန်မာပြည်တွင် တောကိုခုတ်ကြသည်။ တောင်ယာဖေါ်ကြသည်။ ထင်းကိုသုံးကြသည်။ သစ်ကိုထုတ်ရောင်းကြသည်။ကမ္ဘာတွင် စတုတ္ထမြောက် သစ်တောအပြုန်းတီးနိုင်ဆုံးသော နိုင်ငံဖြစ်နေပါသည်။
သစ်ပင်များကို ခုတ်ကြခြင်းကြောင့် တောင်ကတုံးများကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သွန်ရွာလာသောမိုးအတွင်း ကတုံးတို့သည် မြေဆီလွှာကိုမထိမ်းနိုင်။ မြေပြိုခြင်းဖြင့် မြစ်များထဲသို့ မြေထုကို ပို့ချကြရတော့သည်။
စာတန်းတခုတွင် မြန်မာ့သစ်ထုတ်ခြင်းမှ တရားဝင်ရသောဝင်ငွေသည် ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၁ဘီလီယံမျှရှိသည်ကို ဖတ်လိုက်ရသည်။
ယခု ၀ါဆိုလတွင် မြန်မာ့ရေကြီးမှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးအားသည် ၁ဘီလီယံထက်များစွာပိုပါသည်။
ဂေဟစနစ်ပျက်သဖြင့် ရေကြီးရေလျှံခြင်းမှသည် ကျန်ရစ်ခဲ့သော နွံ၊နှုန်းများကြောင့် လုပ်ကိုင်စားမရဖြစ်ကာ မြို့တက်အသက်မွေးမှုပြုလာကြမည့် ကျေးလက်တောရွာနေများ၏ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှု၊ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ၊ တောနေ/မြို့နေဂေဟများကိုလည်းတွက်ရပေဦးမည်။
အမေရိက၊ ကိုလိုရာဒိုပြည်နယ် Animas မြစ်သည် ရွှေတူးမိုင်းတခုမှဖေါက်ချသော ရေဆိုးတို့ကြောင့် အ၀ါရောင်ပြောင်းခဲ့သည်ကို သြဂုတ်လဆန်းသတင်းများတွင်တွေ့ကြရပါလိမ့်မည်။ ဆိုင်ရာဒေသအာဏာပိုင်တို့မှ တာဝန်ယူကာ ဖြေရှင်းပေးလိုက်ရသည်။
ရွှေသတ္တုတူးဖေါ်ခြင်းကို မြန်မာတို့ ချင်းတွင်း၊ဧရာဝတီ မြစ်ညှာများတွင် မြစ်ကမ်းပါးယံများကို မြစ်ရေနှင့်ပိုက်ထိုး၍ဖျော်ချ။ တောင်ထုကြီးများကို ဧရာမတွင်းချိုင့်ဝှမ်းကြီးများဖြစ်စေလျှက် ပါဝါစွမ်းအင်ကြီးမားလှသော ယန္တယားကြီးများသုံး၍ လောဘတကြီးရှာဖွေတူးဖေါ်နေကြသည်။
သဘာဝသယံဇာတများအား မည်သူတွေက မည်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရ၍ မည်သို့တူးကြကာ မည်မျှချမ်းသာနေကြသည်မသိ။ မနှစ်ကမူ မိုးထိမိုးမိဟူသော ရွှေမိုင်းပိုင်ရှင်မှ အသစ်ယူလိုက်သောဇနီးလေးနှင့်အတူ လကမ္ဘာသို့ဒေါ်လာ ၁၅သန်းအကုနက်ျခံကာဟန်းနီးမွန်းအလည်သွားမည့်သတင်းဖတ်လိုက်ရသည်။ အံ့ဖွယ်ပါတည်း။
ထိုထိုနေရာများတွင် လုပ်ထုံးနည်းဥပဒေစံသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသလော။ ငွေကြေးများ မည်သို့မည်ပုံ ရယူ အခွန်ကောက်သုံးစွဲနေကြပါသနည်း။
မေးခွန်းကြီးများထုတ်ကြစေချင်သည်။ မြန်မာ့မြေ၏သယံဇာတကို မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးပိုင်ပါသည်။ တူးနိုင်သူ အကုန်စား မဖြစ်သင့်။ မျှယူသင့်ပါသည်။
ရေလျှံဒုက္ခဘေးများကြုံလာလျှင်တော့ ခံစားကြရသလောက် အကျိုးကျေးဇူးများဝင်နေလျှင် ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲမျှလောက်တော့ သိသင့်သည်မဟုတ်ပါလား။
တကယ်တော့ မြန်မာ့မြေတွင် သစ်ထုတ်ခြင်း၊ ကျောက်တူးခြင်း၊ သတ္တုသယံဇာတဖေါ်ခြင်းတို့သည် မိစ္ဆာအာဇီဝ စစ်စစ်များသာတည်း။ ကျိန်စာသင့်လတံ့..။
ထိုင်း (၂၁၈)။ မြန်မာ (၂၉)
ဧရာဝတီကဲ့သို့မိုင်၁၃၀၀ကျော်ရှိသော ကမ္ဘာ့မြစ်ကြီးတိုင်းလိုလိုသည် ရေထိန်း၊ရေတားဆည်များဆောက်ထားသည်။ လူသားအစွမ်းဖြင့် ရေချိုတို့ကို ဆည်တားထိမ်းကြောင်းသည်။ ရေလိုလျှင်လွှတ်ပေး၍ပိုလျှင်ဆည်သည်။ အပိုဆုအဖြစ် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
ရွှေတူးသဖြင့်၊ ကျောက်စိမ်းဖေါ်သဖြင့် ဖျော်ချပျော်ကျထားသော နှုန်းနွံမြေကြီးများဖြင့် ကောလျှက်ရှိသော “ရာဇ၀င်များ၏သတို့သမီး”သည် သူမ၏ထိမ်းနိုင်စွမ်းကိုလွန်နေသော ရေတို့ကို အံထုတ်တတ်၏။သို့ဖြင့် မြစ်ကြီးဘေးဒေသကျေးရွာများ မိုးကောင်းလျှင်ရေလွှမ်း၍ နွေတွင်ရေရှားကြသည်ဟူလို။ မြန်မာ့စွမ်းအား အဘယ်မှာနည်း။
ဆည်တို့ဆောက်ကြပါ။ မြန်မာတို့ဆည်ဆောက်အတတ်ကို ပုဂံခေတ်ကတည်းက ကျွမ်းခဲ့ကြပါသည်။ “မြကန်သာ” အစချီသော ရှေးပုဂံခေတ်ကဗျာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
နိုင်ငံတကာအကူအညီယူ စနစ်တကျ ဆောက်ကြပါ။ စံနှုံးများအတိုင်းဘောင်ဝင်အောင်လုပ်ပါ။ အစစ်အဆေးခံကြပါ။
ရေအားလျှပ်စစ်သည် ဘေးအကင်းဆုံးနှင့် ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်ပါ၏။ ရေချိုတို့ကိုလည်း ဆည်ထားပါ။ လိုသည့်အချိန်တွင် မျှဝေသုံးစွဲပါ။
ကမ္ဘာတွင် ဆောက်ထားဆည်အများဆုံးမှာ စိန့်ပြည်ဖြစ်ကာ ဆည်ပေါင်း (၂၃၈၄၂ )။ ဒုတိယမှာ အမေရိကပြည်ထောင်စု(၉၂၆၅)၊ တတိယမှာ အိန္ဒိယ (၅၁၀၂)နှင့် နံပါတ် (၂၂)တွင် မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံ(ဆည် ၂၁၈)ဖြင့်လိုက်သည်။ ထိုင်းထက်မြေပိုကျယ်ကာ မြစ်ပိုများသော မြန်မာနိုင်ငံသည်ဆည်အရေအတွက် (၂၉)ဖြင့် ကမ္ဘာ့နံပါတ်(၆၀)၌သာရှိပါ၏။ ၁၀ဆတိုးဆောက်သင့်ပါသည်။
ယခုသြဂုတ်လ ဟီရိုရှီးမားနျူကလီးယားဗုံးကျ နှစ်၇၀ပြည့်နှစ်တွင် ဂျပန်ပြည် ဖူကူရှီးမားတွင် ၂၀၁၁ ငလျှင်ဘေးကြောင့်မတော်တဆဖြစ်ခဲ့သဖြင့် ပိတ်ထားရသော နျူဓာတ်ပေါင်းဖိုများပြန်ဖွင့်လိုက်ရပြီ။ စုစုပေါင်း ဓာတ်ပေါင်ဖို၂၅ခုကို ပြန်လည်ပါတ်မည်ဟု ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုသည်။ ဒေသခံတို့ဆန္ဒပြနေကြသည်။
နျူလျှပ်စစ်စွမ်းအားသည် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတို့မှထုတ်ယူရသော လျှပ်စစ်စွမ်းအားများထက် အန္တရာယ်ပိုသည်မှန်သော်ငြား ဈေးပိုသက်သာသည်။ ကမ္ဘာ့ဂေဟစနစ်ကိုထိခိုက်စေသည့်ဓာတ်ငွေ့တို့အထွက်နည်းသည်။
“The Earth, our home, is beginning to look more and more like an immense pile of filth. In many parts of the planet, the elderly lament that once beautiful landscapes are now covered with rubbish.” – Pope Francis
လူသားတို့တွင်ကား ရွေးချယ်စရာအခြားမြေကမ္ဘာမရှိသေး။ သို့သော်ငြား လူသားမျိုးပွား အားယူရှင်သန်ခြင်းများအတွက် အလိုရှိသမျှကိုကားထုတ်သုံးလျှက်ကာသာနေရဦးမည်။
သို့ဖြင့်၍တိုးတက်သောနိုင်ငံကြီးတို့သည် သူတို့ပြည်သားများအကျိုးစီးပွားဖြစ်သော တိုင်းပြည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား(GDP)တိုးတက်ရေးနှင့်ရင်းစားကာ ကမ္ဘာကို တိုး၍သာဖျက်လျှက်နေပေသည်။ မှန်လုံဓာတ်ငွေ့ထုတ်နေမှုများကို အော်၍သာနေသည်။ လျှော့ကားမလျှော့။ ထိုထိုနိုင်ငံများမှအမှိုက်များ ပစ်လွှတ်သဖြင့်
အိမ်တခုစီ၏ အိမ်တွင်းရေဘုံဘိုင်ကိုဖွင့်လျှင် ရေချိုထွက်လာနိုင်သော “အခြေခံအဆောက်အအုံ”ကို ဦးစားပေးဆောက်ကြပါလေ။
မီးခလုပ်နှိပ်လျှင် လျှပ်စစ်မီးပွင့်လင်းလာနိုင်အောင်သာ ဦးစွာပြုကြပါလေ။
တိုင်းပြည်ငွေအရင်းအမြစ်များကို မှန်ကန်တိကျသုံးစွဲနိုင်သော အစိုးရကို ရွေးချယ်တင်မြောက်ကြပါလေ။
ကမ္ဘာမြေကိုကယ်တင်ရန်မှာ ချမ်းသာနေသော ဖျက်ခဲ့ပြီးသောသူတို့တာဝန်သာလျှင် အဓိကဖြစ်သည်။
မုတ်သုန်မိုးကောင်းသော မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် သစ်ပင်ခုတ်ခြင်းကို ဥပဒေအရ လုံးဝပိတ်ပင်လိုက်ပါလျှင် ကမ္ဘာကြီးအတွက် တာဝန်ယူမှု ပြည့်စုံလုံလောက်သည်ဟုထင်သည်။ ။
Kai has written 973 post in this Website..
Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government foraredress of grievances.
View all posts by kai →
He is not only person facing that kind of situation.
How can we do for them ????
So sad ….. :-((((((((((((((
From Mg Aye Chan Swe Facebook sharing
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်မသေခင် တရက်အလို ရေဘေးဒုက္ခသည် တယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စကား
” ငါ့တူတို့ တူမကြီးတို့ ခုလို ဦးကြီးတို့ရွာကိုလာလှူတာ ကျေးဇူးတင်ပါ ကယ်သူမဲ့ ဒုက္ခတွေ ပင်လယ်ဝေ ခိုကိုးရာမဲ့ နေတဲ့အချိန်မှာ အားကိုးစရာ အားတက်စရာ နတ်တွေရောက်လာသလိုပါပဲ ဒါပေမဲ့ ငါ့တူတို့ရာ အားနာပါရဲ့ကွာ ဦးကြီးတို့တောသားတွေ ပြောဘွင်းဘွင်းပဲ ငါ့တူတို့လာလှူတာတွေကို လေးရက်တပတ်တလ စားလို့ပေမဲ့ ငါ့တူကြီး ပြန်သွားပြီးရင် ဒါမှမဟုတ် ဒီအစားအသောက် ဆေးဝါးတွေ ကုန်သွားရင် ကျန်ခဲ့မဲ့ ဦးတို့ဘဝတွေက ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပါပဲ။ ဦးကြီးတို့ဘဝ ပျက်သွားပါပြီ ဦးကြီးသမီး အငယ်ဆုံးရေနှစ်သေသွားတယ် ဟော ဟိုးက ရေတွေကျတော့ ”
(စကားပြောတာ ခဏနားရင်း အဝေးကိုငေး ယောကျာ်းတယောက်မို့ ရှိုက်ခါမပိုပေမဲ့ မျက်ရည်တွေ ဒလဟောကျ လာတယ် နောက်ဆက်ပြောတယ်)
” ရေတွေမကြီးခင်က ခိုင်းနွားသုံးကောင်ရှိတယ် ရေကြီးတော့ တကောင်က ရေနဲ့အတူ မျောပြီးသေသွားတယ် တကောင်က အစားငတ်လို့လား ပိုးထိလား သေချာမသိဘူး ရေတွေက တအားတက် လူတွေတောင် အနိုင်နိုင် ရေမမြုပ်သေးတဲ့ အိမ်ခေါင်မိုးကိုဖောက် ထုတ်တန်းပေါ် ဝါလုံးခင်းနေရတာ ကြည့်တော့။ ဘယ်လာ နွားတွေကို ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး သေသွားတယ် နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ တကောင်လဲ အစာငတ်နေတော့ ဘယ်နေ့သေမလဲ မသိဘူး။ ဦးကြီးတို့မှာ ဘာမှမရှိတော့ဘူး ဦးတို့ မိသားစုဘဝပျက်ပြီ သမီးကလဲ သေ။ ရေကျသွားလို့ ဘဝရပ်တည်ဖို့ဆိုတာ ဘာမှမရှိတော့ဘူး ဦးမိန်းမလဲ သမီးစိတ် နွားစိတ်တွေနဲ့ ဟိုထုတ်တန်းပေါ်က ပျဉ်ပြားပေါ်မှာ ခွေနေပြီ ခုပြောတာ ဦးကြီးဘဝပါ ငါ့တူကြီးတို့ တူမကြီးတို့ဘဝမဟုတ်ဘူး ညနေဆို ငါ့တူတို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ပြန်သွားကြမယ် ဦးတို့မှာ ညမှောင်မှောင် ခေါင်မိုးပေါ်မှာအကုန်တက် မိုးကရွာ မျောမြွေက ကြောက်ရသေး ။ ဒီရေဆို အဝတ်အစားနဲ့ နေလာတာ ခနှစ်ရက်ကျော်ပြီ။ ဗိုက်တွေလဲဆာ အသည်းခိုက်အောင် အေးပေမဲ့ ရင်ထဲကအပူကြောင့် အေးမှန်း ဆာမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ တသက်နဲ့တကိုယ် ဒီဘဝကို ရောက်မယ်လို့ လုံးဝ မထင်ခဲ့ဘူး ဦးကြီတို့ဘဝကို ဘယ်မင်းမှ မကယ်နိုင်တော့ဘူးလား နားလည်ပါတယ် ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ့်ပြသ၁နာကိုယ်ရှင်းရမှာပေါ့ ဒါပေမဲ့ ဒီတခါတော့ ဘဝက ဒီမှာပဲ တခန်းရပ်ပြီထင်ပါတယ် ငါ့တူတို့ရယ် ”
ထေရာဝါဒ၀င်မြန်မာအများစုတွေ… ဘာ့ကြောင့်ဘာကိုဘယ်အချိန်ဘယ်လိုလှူရမယ်ဆိုတာ.. ဘယ်တုံးကမှမသိခဲ့..
“ငါ့လက်ကလွတ်.. ဗြွတ်..” ကိုအလှူလို့နားလည်ခဲ့…
တမြန်နေ့ကတင်.. ရေဘေးအလှူကအပြန်… ကားမတော်တဆနဲ့ဆုံးပါးတဲ့.. စင်္ကာပူက.. အလှူဦးဆောင်သူသတင်း တက်လာသေး..။
သူဂျီးရဲ့စာ ​နောက်​ အရီးစာကို ဖတ်​ပြီး ဘာ​ပြောရမှန်း မသိဘူး။ စိတ်​မ​ကောင်းဘူး။ ​ရေ​ဘေး သမား​တွေကို တကယ်​ ကိုယ်​ချင်းစာတယ်​။ ညီမ​တော်​​တောင်​ အားလုံးက ပြန်​ပြီး ဝိုင်းဖြည့်​တာ​တောင်​​သောက​တွေ တ​ပွေ့တပိုက်​။ ပြန်​ဖြည့်​စရာမရှိတဲ့ လူ​တွေရဲ့အပူ ပိုဆိုး​တော့မ​ပေါ့။
အဲဒီရေလွှမ်းဒေသကလူတွေ.. အသက်ရင်းပြီး.. မြို့တွေပေါ်တက်ကြတော့မှာပေါ့..။
တော/မြို့.. လူဦးရေအချိုးချ.. ဂေဟပျက်ပါပြီ..။
ရန်ကုန်မြို့ကြီးပိုကျပ်လာမယ်..။ ရေချို၊ လျှပ်စစ်။ ရေဆိုးစနစ်တွေ မနိုင်မနင်းနဲ့..။
နောင် ၁၅နှစ် ဘန်ကောက်မြို့ကြီး ရေအောက်ရောက်ချိန်.. ရန်ကုန်ကို မျှော်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ…။
Bangkok is sinking, and may be underwater in 15 years …
Jul 22, 2015 – … has found that Bangkok, the country’s capital and most populous city, … that entire swaths of the city would be underwater before 2030.
မင်း ခန့် ကျော် says:
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကို.. ရွေးချယ်ခွင့်မရ.. မရှိ…
နိုင်ငံကြီးသားစိတ်မရှိသေးတဲ့.. ချမ်းသာလာတဲ့စိန့်တိုင်းသားတွေဟာ.. သေချာတဲ့စနစ်နဲ့သာ အုပ်ကိုင်မထားရင်.. မြန်မာတွေရဲ့သွေးတွေကိုပါ.. အချိုရည်လုပ် သောက်ပလိုက်လိမ့်မယ်..။
လမ်းဘေးကျောက်ခဲကနေ.. အိမ်ရှေ့နံပြည်စုတ်အထိ ၀ယ်ကြလိမ့်မယ်..။
ဘိုးဘွားမြန်မာတွေရဲ့.. အကြီးမားဆုံးချို့ယွင်းချက် ..အမွေက.. လူဦးရေပဲ..
us လို အဘက်ဘက်ကစနစ်ကောင်း
ကျတော်တို့အနေအထားက ကိုယ်နဲ့ လက်ရည်
Shwe Ei says:
*****-မုတ်သုန်မိုးကောင်းသော မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် သစ်ပင်ခုတ်ခြင်းကို ဥပဒေအရ လုံးဝပိတ်ပင်လိုက်ပါလျှင် ကမ္ဘာကြီးအတွက် တာဝန်ယူမှု ပြည့်စုံလုံလောက်သည်ဟုထင်သည်။ ။*****
-ဆယ်နှစ် ဆယ်နှစ် … အိုက်ဂလောက် ရှိရင် တစ်နိုင်ငံလုံး မြုပ်ဘီလို့စ် :-/
သစ်ပင်ကြီးတွေ ဘယ်အပင်မှ.. ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ.. ဘယ်သူမှ… လုံးဝမခုတ်ရ… လို့..။
တကယ်တော့ ပိုက်ဆံရှိရင်.. အကုန်လုပ်လို့ရသဗျ..။
ယူအက်စ်က.. နှစ်၃၀၀၀ သက်တမ်းရက်ဒ်ဝုဒ်တောကြီးတောင်.. ချင်းပြည်နယ်ရွေ့လိုက်လို့ရသေး..
ဒီခေတ်မယ်.. အပင်လိုက်ကလည်း.. ရွေ့လို့လွယ်ပါဘိနဲ့…။
.. အသက်တွေ.. ချွေးတွေ.. သွေးတွေ..
ခုရက်ထဲ ဖွဘုတ်မှာ ကျိုးသွားတဲ့တံတားတွေမှာ သံချောင်းမပါပဲ ကွန်ကရစ်ချည်းပဲလောင်းထားတာနဲ့၊ ၀ါးလုံးထည့်လောင်းထားတာနဲ့။
ရှက်တတ်ရင် သေလောက်တယ်။ :b:
အဲဒါကြောင့်..နောက်ဆို.. ဆည်ဆောက်တိုင်း.. လမ်းဖောက်တိုင်း.. မြန်မာတွေနဲ့ဘာပရောဂျက်ကြီးလုပ်လုပ်… နိုင်ငံခြားက.. စိစစ်နိုင်တဲ့.. လွတ်လပ်တဲ့ တတိယအဖွဲ့တခုခုကို.. ငှားစစ်သင့်တယ်..။
မြန်မာ့ဂဇက်ပုံနှိပ်သတင်းစာထဲတောင်.. ယူအက်စ်ကျောင်းဆင်း လိုင်စင်ရ.. အင်ဂျင်နီယာ၂ယောက်က.. ကွန်ဆားဒန့်အတွက်.. ကြော်ငြာထည့်ထားသေး..။
သူတို့ငှားပေါ့..။ ဈေးလည်းသက်သာ..။ ဗမာလိုလည်းသိ..။
အလွန်အကျူး ဖွဲ့နွဲ့ သီကုံးထားတဲ့ သင်ပုန်း
အိမ်နီးချင်းဆိုတာနဲ့ပဲ အဲ့အိမ်နီးချင်းကို လှလှပပ အကွက်ရွှေ့နိုင်တဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင် အမျိုးသမီးကိုပဲ မျက်လုံးထဲ မြင်မိနေတယ်…
တရုပ်ကိုကိုင်ရဲ / နိုင် တာမျိုးးးး
တရုပ်ကိုကစားရဲ တဲ့ ဒေါ်စု လိုမျိုး
စိန့်ပြည်ရဲ့ ကြွယ်ဝမှုတွေ.. မြန်မာပြည်ထဲရောက်လာအောင်.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို.. သိနားလည်တဲ့… တခြားသူတွေလိုပါသေးတယ်..။ အင်မတန်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်..။
နယ်စပ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့.. ဘိန်းတွေ.. မူးယစ်ဆေးတွေ…။
လက်နက်တွေ.. ။ လူတွေ..။
ကျုပ်နားလည်သလောက်ပြောရရင်.. မြန်မာပြည်ကထွက်သွားတဲ့ သစ်တွေနဲ့သယံဇာတတွေထက်.. သိပ်မလျှော့တဲ့.. မူးယစ်ဆေးတွေ.. သူတို့ပြည်ထဲဝင်သွားတာပဲ..။
မြန်မာတွေ.. အပ်ကနေ.. လေယဉ်အထိ.. တခုမှပြည်တွင်းမှာမထုတ်နိုင်..။
ဒီငွေတွေ.. ဘယ်ကလာသလဲ..။ ?
ယူနန်သား သန်း၅၀ နီးနီး
မြန်မာပြည်အတွက် ဗီတို သုံးပေးတော့မည်မထင်။
သစ်​ပင်​ခုတ်​ခြင်းကို ဥပ​ဒေ အရ ပိတ်​ပင်​လိုပါလျှင်​ ကြံ့ဖွတ်​ကို ဖြုတ်​ချနိုင်​ဖို့လိုပါသည်​ ။ သို့မဟုတ်​ပါက ဤဥပ​ဒေသည်​ နိုင်​ငံသားအတွက်​သာဖြစ်​ပြီး တရုပ်​က ​တောင်းလျှင်​ ထုပ်​​စေ ဖြစ်​သွားပါလိမ့်​မည်​ ။
ဥပဒေကဥပဒေ.. လိုက်နာကြတာ/မလိုက်နာကြတာက.. တပိုင်း..။
ဒါက.. အစိုးရဆိုတဲ့.. အုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်…။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ.. ရဲတွေ..တပ်တွေ.. ထောက်လှမ်းရေးတွေ.. မီဒီယာတွေအကုန်အလုပ်..။
ဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ကြတာမှာ.. တရားမျှတဖို့အတွက်.. ရပ်တည်ပေးထားရမှာက.. တရားရေးမဏ္ဍိုင်အလုပ်..။
သူများနိုင်ငံတွေကတော့ မြစ်ကြီးတွေတောင် လူစွမ်းအားနဲ့.. တူးမြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတယ်..
Hebat sungai diaorang..adakah sesuai buat macamni kat Malaysia?
Posted by Siakap Keli on Sunday, June 7, 2015
အဲဒီဖားကန့်မြေပြိုတာကြည့်ပြီး.. မြန်မာပြည်အနှံ့ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေရဲ့.. တရားခံကိုမြင်မိတာပဲ..။
ကျနော်ငယ်က တည်း က ထနောင်းကြောင်ခြစ် လို့ ဖတ်မိခဲ့တယ်ထင်တယ်
အထူးဤမျှ ဆယ်နှစ်လ၀ယ် ရွာထပ်ပစ္စုန် မရွာတုံသော်
ကိန်းကြုံဆန်းပြား မင်းသားရဟန်း ပေါ့သွမ်းတိမ်းစောင်း
မကောင်းကျင့်ညစ် ထို့ကြောင့်ဖြစ်၏ ကျမ်းစစ်ကျမ်းမှအဟောတည်းလို့.. ပါသဗျ..။
မိုးပုံမှန်မရွာသမျှ.. သူတို့သွားထိခိုက်နေသမို့.. မင်းညီမင်းသားတွေ.. ဒါမှမဟုတ်..ရဟန်းတွေ နိဂုံးစာဖျက်လိုက်တယ်ထင်ကြောင်း…။
Soe Min Aye
မင်းပြားမြို့နယ် မင်းဖူးရွာလေးဟာ ပန်းမြောင်ကြီး
လေးများမှာမြစ်ရေ ချောင်းရေ စမ်းရေတို့ကိုအသုံးပြု့
ပြတဲ့လူနာ 100 ကျော်မှာ ခုလိုအရေပြားအမည်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေဖုံးလွှမ်းခံရမှု(ရေကြီးမှု) (၆)မျိုးရှိတယ်။
(၁) ကျယ်ပြန့်ရေကြီးမှု (Wide Area Floods)
(၂) လျပ်တပြက်ရေကြီးမှု (Flash Floods)
(၃) ဆူနာမီရေကြီးမှု (Tsunami Floods)
(၄) မုန်တိုင်းဒီရေ ရေကြီးမှု (Storm Surge Floods)
(၅) လူလုပ်ရေကြီးမှု (Man-made Floods)
(၆) နယ်စပ်ကျော်ဖြတ်ရေကြီးမှု (Transboundary Floods)
အခု ဒီနှစ် ၂၀၁၅ မှာ (၁) (၂) နဲ့ (၅) ကတော့ ဖြစ်ပြီးနေပြီ။
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကြောင့် ဟိမ၀န္တာကရေခဲတွေက အများကြီးအရည်ပျော်ကြကုန်တော့ ပျော်ကြတဲ့ရေခဲရေတွေဟာ အနိမ့်ပိုင်းတွေမျာ စုဆောင်းမိကြပြီး သဘာဝမဟုတ်တဲ့ရေကန်တွေ(Artificial Lakes)တွေ ဟိမ၀န္တာတောင်တွေပေါ်မျာ အများကြီးပေါ်လာတယ်။ င်္ဒရေကန်တွေဟာ မြေသားခိုင်မာမှု မရှိတဲ့ အောက်ခံမြေပြင်ပေါ်မှာ သဘာဝမဟုတ်ပဲတည်ရှိလာနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုနှစ်လို ဟိမ၀န္တာတောင်တွေပေါ်မှာ မိုးသည်းထန်လာရင် ကန်အောက်ခံမြေတွေဟာ ပြိုကျတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါ ကန်တွေထဲကစုဆောင်းထားတဲ့ များပြားလှတဲ့ရေတွေဟာ တောင်းဆင်ခြေလျှောတလျှောက် အရှိန်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းလာတတ်ကြပါတယ်။ ရေစီးနှုန်းပြင်းထန်လွန်းလို့ တောင်ပေါ်ဆူနာမီ(Mountain Tsunami) လို့တောင်ခေါ်ကြပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်မှာသတိရှိကြဖို့ဒါတွေကို ပညာရှင်တွေက သတိပေးနေပြီ။
၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတုန်းက မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ တစ်နေ့ထဲနဲ့ရေ(၂၄)ပေကျော်တက်သွားလို့ မြစ်ကြီးနားမြို့ ရေမြုပ်သွားခဲ့ရတာကို မှတ်မိဦးမှာပေါ့။
Himalayan Outburst Lakes May Be Increasing GLOFs
By Brett Walton on 2010-06-29Maung Maung Than
July 26 at 9:41am • Edited •
Maung Maung Than
ကချင်ပြည်နယ် ထိပ်ဆုံးက ရေခဲကန်ကြီးတွေရဲ့GLOFF Glacier Lake Run Off ကလဲ ဖြစ်ရမဲ့အချိန်ရောက်နေပြန်ပြီ နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာ ၂၀၀၄မှာ
ကျနော် ၂၀၀၃ နီပေါက ပြန်လာတော့ သတိပေးခဲ့တာ
အကိုကြီးနှစ်ယောက်က ဝေးတယ် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သတိရနေတယ်၊ ရေခဲရေတွေ ငါးမိနစ်လောက် စိမ်လိုက်တာနဲ့ လူ တိရိစ္ဆာန်အကုန်သေရတာ၊ ပူတာအို မြစ်ကြီးနား အထက်များ ဒီကိစ္စက အရင်တခါပဲ စာရေးခိင်းဘူးတယ် Weekly ကို၊
ဒီကန်တွေရဲ့ ဆည်ဘောင်တွေဟာ မြေသားတွေ နောက် အထက်ဘက်က ဒါမျိုးကန်တွေကျတော့ ရေခဲနဲ့ မြေသားတွေ၊ ရေတွေ ပြည့်လာပြီး ရေဒဏ်ကို မခံနိုင်တဲ့အခါမှာ ရှစ်နှစ်ကို တကြိမ်လောက် ကျိုးတယ်၊ ဆည်ကျိုးသလိုပဲ ရေခဲရေတွေ ကျလာတယ် အထူးသဖြင့် မိုးအရမ်းများတာနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင် Glacier Lake Run Off GLOFF လို့ ခေါ်တယ် နီပေါတို့ ဘူတန်တို့ မှာ အင်မတန်ကြောက်စရာပေါ့၊ Mountain Tsunami လို့ ခေါ်ရိုးရှိတယ်
– မြန်မာမှာ ကျနော် မေးဘူးတယ် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတယ် ၂၀၀၄တုံးက အဲဒီလို ဖြစ်တယ်လို သံသယရှိခဲ့ဘူးတယ် မိုးဇလကတော့ တရုတ်ပြည်ဘက်က မြစ်ကြောင်းပြောင်းဝင်လာတယ်လို့ ပြောတယ်၊ ကချင်တွေကတော့ အဲဒီကန်ကြီးတွေ ကျိုးတတ်တယ်ပြောတာပဲ desk study ပြန်လုပ်သင့်တယ်၊ ဓါတ်ပုံတွေ ပြန်ရှာပြီး ၂၀၀၄ပူတာအို မြစ်ကြီးနားရေကြီးတာကတော့ အဲဒီလက္ခဏာတွေပဲ မမှန်ရင် ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ မှန်ခဲ့ရင် ဒီအချိန်က ၁၀နှစ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ကို Khun Khon Ja နဲ့ ကချင်မိတ်ဆွေများ သတိပေးပါတယ်
Shar Thet Man (82278 Kyats )